घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » सरकारी समाचार » यूएनडब्ल्यूटीओ चुनावले संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा रहेको शिष्टतालाई भर्खरै मार्यो
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • ब्रेकि European युरोपेली समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • सरकारी समाचार • हवाई ताजा समाचार • मानव अधिकार • LGBTQ • समाचार • स्पेन ताजा खबर • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा रहस्य • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
युएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी काउन्सिलले २०W२ को अन्त्यसम्म यूएनडब्ल्यूटीओका महासचिव जुराब जुराब पोलीकाशिविलको जनादेश विस्तार गर्‍यो। यो दुखद दिन हो र श्री जुੁਰबको योग्यता वा गतिविधिहरूको मूल्या not्कन होइन।
आज विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) का ११113 औं कार्यकारी काउन्सिलले बहरेनका एकमात्र उपस्थित श्रीमती शाइखा माई बिन्त मोहम्मद अल खलिफाको बिरूद्ध current 76% को व्यापक अन्तरले आफ्नो वर्तमान महासचिव जुराब पोलीकाशिविलीलाई पुनः निर्वाचित गर्‍यो।
यो UNWTO चुनाव राम्रो वा नराम्रो उपलब्धी, दर्शन वा संयुक्त राष्ट्र स aff्गठन सम्बद्ध एजेन्सीले गर्ने पर्यटन संसारको नेतृत्व लिन खोज्ने गतिविधिहरूको बारेमा थिएन। यो एकल व्यक्तिको स्वार्थ र चुनाव जित्ने कुराको बाबजुद थियो।
पहिले नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अपमान र चोट थप्न म्याड्रिडमा दुबै स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेज र श्रीमती किंग फेलिप VI ले यूएनडब्ल्यूटीओ र यसको नेतृत्वलाई समर्थन जनाए। जर्जियाका विदेश मन्त्रीले चुनावको अघिल्लो रात आधिकारिक डिनर प्रायोजित गरे।
सबैले के कुरामा सहमत हुनुपर्दछ: यूएनडब्ल्यूटीओका महासचिव जुराब पोलोलिकाश्विली, जो म्याड्रिडमा स्पेनमा जर्जियाका पूर्व राजदूत थिए। कूटनीतिक हेरफेर को एक मास्टर २०१ 2017 मा र २०२० मा अझ सुधार भयो।
२०१ 2017 मा, महासचिवका रूपमा उनको पुष्टिकरण लगभग चेंग्दू, चीनको यूएनडब्ल्यूटीओ महासभा अगाडि प्रतिस्पर्धा भएको थियो, उनीहरुका जिम्बाब्वेका प्रतिद्वन्द्वी डा। वाल्टर मेजेम्बीले दक्षिण कोरियाका सुश्री धो यंग-शिमलाई समर्थन गरे।
डा। मेजेम्बीले आफ्नो आपत्ति फिर्ता लिन राजी हुनुको कारण युएनडब्ल्यूटीओले चुनावी प्रक्रियाको प्रक्रियालाई पुन: काम गर्ने वाचा गरेको थियो। यसलाई दुबै पूर्व महासचिव डा। तलेब रिफाई र आगमन जुरब पोलीकाशिविलीले समर्थन गरेका थिए। डा। मेजेम्बीलाई यस्तो पहलको नेतृत्व गर्ने आश्वासन दिइएको थियो।
यो गलत राजनीतिक प्रतिबद्धतामा परिणत भयो र २०१u मा जुराबको लागि सहज कन्फर्मेसनको परिणाम भयो।
निर्वाचन प्रक्रियालाई पुन: काम गर्ने फलफूल भएन।
२०२० पछि, कोभिड १ world को कारणले पर्यटन र पर्यटन संसार सबैभन्दा खराब स world्कटबाट गुज्रिरहेको छ।
जुੁਰबले आफ्नो पुनः निर्वाचन सुरक्षित गर्न थप राजनीतिक उपकरणहरू थपेर यस स crisis्कटको फाइदा लिन सफल भएका छन्।
UNWTO ले कुनै पनि संयुक्त राष्ट्रको निष्पक्ष चुनावको आह्वानलाई दागी बनाएको छ, यो प्रकाशन सेप्टेम्बर १,, २०२० मा सोधेको प्रश्न हो
यहाँ सारांश छ:
जुरबले सेप्टेम्बर २०२० मा उनको आफ्नै देश जर्जियामा ११२ औं कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरूको लागि शारीरिक बैठक आह्वान गरे। कोरोनाभाइरसले कुनै पनि परिषदका सदस्यहरूलाई उपस्थित हुन गाह्रो बनायो।
जर्जियामा एजेन्डा वस्तुहरू ल्याउने समय सीमाले यथार्थमा ११ participating औं काउन्सिलको बैठकको लागि मितिको सट्टा जनवरी १ 113-१-18 मा भाग लिन प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूले आपत्ति जनाउन सकेन। कारण घटना FITUR सँग मिल्नु पर्ने थियो, यद्यपि FITUR यसको केही दिन पछि रद्द गरियो।
जर्जियामा एजेन्डा वस्तुहरू ल्याउने समयावधिले सदस्यहरूलाई वैकल्पिक पक्ष लिन आउँदैनथ्यो जब यो घोषणा गरियो कि नयाँ उम्मेद्वारहरूले interest हप्ता भित्र जुरबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आफ्नो रुचि दर्ता गर्नुपर्नेछ। यो एक बर्ष भन्दा बढी समय थियो कि त्यस्ता उम्मेदवारले तयार पार्नेछ। धेरै UNWTO सदस्य देशहरू आश्चर्य द्वारा पक्राउ परेका थिए वा साँचिकै महसुस हुन सकेका थिएनन्। सदस्य देशहरूमा प्रेसिंग मुद्दा COVID मा थियो न कि उम्मेद्वारहरूमा।
सात उम्मेद्वार जे भए पनि दर्ता गरे, तर बहराइनबाट केवल एक उम्मेदवारलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइयो। जुरब अन्तर्गत यूएनडब्ल्यूटीओ सचिवालयले applications निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। किन र कसले आवेदन दिए यो थाहा छैन।
जुੁਰवको बिरूद्ध प्रचार गर्ने एक मात्र उम्मेद्वारसँग शाब्दिक रूपमा प्रचार गर्न समय थिएन। COVID को कारण यात्रा प्रतिबन्धले एक अभियानलाई असम्भव बनायो।
जुੁਰबले विश्व भ्रमण गर्न यूएनडब्ल्यूटीओको पैसा प्रयोग गरे तर कार्यकारी काउन्सिलका सदस्य देशहरूमा मात्र केन्द्रित भए। यी देशहरूले सबै सदस्य राष्ट्रहरूको केवल २०% योगदान गर्दछन् तर गत २ बर्षमा जुराबले यसका लागि हेरचाह गरेका थिए, जबकि countries०% सदस्य देशहरूले कुनै वा थोरै ध्यान पाएनन्।
स्पेन लक-डाउनमा थियो, जाडोको आँधीबेहरीले कार्यकारी काउन्सिलको बैठकभन्दा २ दिन अगाडि शहरलाई पंगु बनायो, धेरै जसो मन्त्रीहरूलाई स्पेनमा यात्रा गर्न असम्भव भयो।
UNWTO ले म्याड्रिडमा शारीरिक बैठकमा जोड दिए र भर्चुअल चुनाव वा बैठकलाई अनुमति दिँदैन।
अन्तिम मिनेटमा 48 XNUMX घण्टा चल्दा जर्जियाका परराष्ट्रमन्त्रीलाई चुनावका लागि यूएनडब्ल्यूटीओ एजेन्डाको हिस्साका रूपमा आमन्त्रित भइसकेको केही घण्टा अघि आधिकारिक डिनर राख्नको लागि अनुमति दिइयो। कुनै पनि देश विदेश मन्त्रीको बिरुद्द जान चाहँदैन, जो आफ्नो उम्मेद्वारको जीत हेर्न आउँदै थिए।
मन्त्रीहरू सजिलै यात्रा गर्न नसक्ने हुँदा, म्याड्रिडका दूतावासहरूले उनीहरूको देशका तर्फबाट मतदान गरे।
यो कति स्पष्ट छ कि कति पर्यटन मन्त्रीहरूले देखाए, कति जनालाई उनीहरूका दूतावासहरूले प्रतिनिधित्व गरेका थिए, र कति प्रोक्सी भोटहरू हिजो प्रक्रियामा समावेश गरिएको थियो। जस्तोसुकै यो स्पष्ट छ कि केवल मुठ्ठी देशहरूले १ 150०+ सदस्य राष्ट्रहरूको लागि निर्णय गरे जसले यस उद्योगले सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो संकटबाट पर्यटनको नेतृत्व गर्नेछन्।
यस अघिका दुई यूएनडब्ल्यूटीओ महासचिव, एक पूर्व सहायक महासचिव, र एक पूर्व यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी निर्देशकले चुनावमा निष्पक्षताका लागि आग्रह गरे, तथापि, यो कुरा जुरबले बहिरा कानमा लगाए।
विश्व पर्यटन नेटवर्क (डब्ल्यूटीएन) को माध्यम बाट, UNWTO चुनाव शिविरमा शालीनताn सुरु भयो, र सयौं WTN सदस्यहरू प्रतिनिधित्व गर्दै ट्राभल उद्योग पेशेवरहरू प्रतिनिधित्व गर्दै १२ 125 देशहरूबाट सूचित गरियो। सबैले UNWTO लाई कार्यकारी काउन्सिलको बैठकको समय तालिका बनाउने, अरु धेरै उम्मेदवारहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र अभियानको निष्पक्षताको संरक्षणका लागि निवेदनलाई समर्थन गरे। यस याचिकामा डा। वाल्टर मेजेम्बीले हस्ताक्षर पनि गरेका थिए जसलाई २०१ 2018 मा जुरब र तलेबले चुनावका नियमहरु पुनःनिर्माण गर्न सुम्पिएको थियो।
निर्वाचन प्रक्रियामा निष्पक्षता र शिष्टताका लागि अनुरोध गरिएको यस याचिकालाई त्यसपछि ईमेल, फ्याक्स, र / वा क्रिसमस अघि यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी काउन्सिलका countries 35 सदस्य देशहरूमा पुर्‍याइयो। सबै अमेरिकी दूतावासहरू सेवा गरिएको थियो। केवल एक देशले एक स्वीकृति पठायो।
यो याचिका न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा पनि हस्तान्तरण गरिएको थियो।
यो चुनाव अनुचित मात्र थिएन, तर उल्ल .्घन पनि भयो JIU नैतिक नियमहरू र यस वर्षको पछि मोरक्कोमा यूएनडब्ल्यूटीओ महासभाको आगामी २ 24 औं अधिवेशनले समर्थन गर्नु हुँदैन।
Bah बहराइनका लागि मतदान गरियो। यो स्पष्ट छैन कि २ Executive वटा कार्यकारी काउन्सिल देशहरू मध्ये कतिले Zurab को लागि मतदान गरे प्रत्यक्ष वास्तवमा वा प्रोक्सी मार्फत। यदि कुनैले ध्यान जुरबको कार्यालयको समयमा पाए भने, यी कार्यकारी काउन्सिल देशहरू हुन्। यी देशहरू जुराबका लागि मैत्रीपूर्ण थिए।
हिजो म्याड्रिडमा आएका केही प्रतिनिधिहरू केवल एक जना व्यक्तिले गरेको ध्यानबाट अन्धा भएका थिए र उनीहरूले यो विश्वव्यापी संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीका बाँकी १ the०+ देशहरूको लागि पनि मतदान गर्ने जिम्मेवारी बिर्सेका थिए।
वर्ल्ड टुरिज्म नेटवर्कका संस्थापक जुर्गन स्टिनमेत्जले भने: “चुनाव जुੁਰब कत्तिको योग्य वा योग्य छैन भन्ने बारेमा थिएन। यो उसको प्रदर्शन र भविष्यमा उसको अपेक्षित प्रदर्शनको बारेमा थिएन। यो निष्पक्षता र नैतिकताको बारेमा थियो।
"संयुक्त राष्ट्र संघ वा बेलायत जस्ता देशहरूले पनि यस एजेन्सीलाई सञ्चालन हुन दिइने अनुमतिलाई कसरी जान्ने भनेर UNWTO ले कसरी आशा गर्न सक्छ?"
"यो विश्व पर्यटन को लागी अर्को दुखद दिन हो.
'विश्व यात्रा र पर्यटन परिषदका ग्लोरिया गुवारा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई सँगै ल्याउन सफलतापूर्वक प्रयास गरिरहेकी छन्। यस स in्कटमा निजी क्षेत्रको भूमिकाको बारेमा WTTC लाई मिनेट मात्र बोल्ने अनुमति दिइयो। को विश्व पर्यटन नेटवर्क WTTC का साथ काम गर्न तयार छ।
मेरो लागि, ग्लोरिया एक साँचो महिला र उनको जानकार टोलीले कसरी अभूतपूर्व परिस्थितिमा प्रतिक्रिया दिन सक्दछन्।
“स crisis्कटको समयमा स्वार्थको लागि ठाउँ हुँदैन। हामीले भर्खरै यो अमेरिकामा हाम्रो राष्ट्रपतिको चुनावको साथ देख्यौं।
"जब म खुसी छु जुराबले पनि आफ्नो अभियानमा 'एकजुटता' भन्ने आवाज उठाए, तर अहिलेसम्म उनले २०१ 2018 मा डब्ल्यूटीएन वा कुनै पनि कुराको लागि पदभार लिए पछि उसले एकपटक प्रतिक्रिया गरेन। eTurboNews। "
यो महत्वपूर्ण चुनावमा जुराबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उचित अवसरको कारण घोटाला गरियो बहराइनका श्रीमती शेखा मै बिन्त मोहम्मद अल खलीफाले श्री जुरबलाई कृपापूर्वक बधाई दिए।